Maxaa kala socotaa Koontaroolada laga soo galo magaalada Muqdisho? – Bandhiga
Maxaa kala socotaa Koontaroolada laga soo galo magaalada Muqdisho?
Mas’uuliyiin katirsan maamulka GobalkaBanaadir oo uu hogaaminayay Guddoomiye Ku-xiggeenka dhanka Amniga & Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed C/laahi Tuulax ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah Koontaroolada ay ku sugan yihiin ciidamada Booliska ee ammaanka Muqdisho ay ka sugaan.
Koontaroolada kala ah Waxar Cadde, Daaru Salaam, Galgala, iyo Gubadleey ayuu tagay gudoomiyaha halkaasi oo Ciidamada Booliska ay ku leeyihiin Koontaroolo ay ku baaraan gaadiidka Muqdisho soo galaya.
Ujeedada Kormeerka ayaa ahaa qiimeyn guud oo ku aadan sida Ciidamada ay halkaasi uga shaqeeyaan, waxaana uu dhiirageliyay ciidamada Booliska ee u taagan Suggida ammaanka Muqdisho ee Koontarooladaasi ku soo arkay.
Madaxda Maamulka Gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waday dardargelinta qorshaha suggida & kormeerka ammaanka Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo Gudoomiye Tuulax inta badan uu kormeer ku sameyay Degmooyinka Muqdisho oo isbedel amni wayn laga dareemaayo.
“Waxaan ku soo arkay ciidan heegan ah habeen iyo maalin una taagan qoraxda sidii ay dadka magaalada dagan nabadgalyo ugu seexan lahaayeen waxaana ku dhiirigeliyay shaqada ay u hayaan Qarankooda.” Ayuu hadalkiisa ku daray Gudoomiye Tuulax.